Logo Maker | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Aurora 3D Text & Logo Maker 14.09.09 Multilingual Full Version Free Download
ကဏ္ဍ Logo Maker
Aurora 3D Text And Logo Maker v14.08.27 + Portable
ဒီကောင်လေး ကတော့ အထွေအထူး ပြောဖို့တော့ လိုမယ် ထင်တော့ပါဘူး။ စာလုံးနဲ့ Logo တွေကို 3D Text ဒီဇိုင်း
လေးတွေ ဖန်းတီး တဲ့ ဆော့ဝဲလေးပါ။ တောင်ဆို ထားကြ သူတွေ အတွက် ဘာကီးမှ ထည့်စရာ မလိုတဲ့ Portable
အသုံပြုမယ့် အချိန်ကြမှ ခေါ်ပြီး Run လိုက် ရုံပါပဲ။
Aurora 3D Text Logo Maker is an advanced application intended to enable you to design 3D Text, buttons, logos. Featuresalarge number of shapes and text template. There are reflections and texture animation effects, andavariety of quick tools, very easy to use.
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, September 10, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Logo Maker, Portable
ဒီကောင်လေး ကတော့ 3D logo တွေ 3D စာလုံး တွေကို အကောင်းဆုံး ဖန်တီးနိုင် ပါတယ် ။ animated effects တွေ ကလဲ စုံလင်ပြီး 3D object templates ပေါင်း 200 ကျော် ပါဝင် လာကာ Professional Project templates က 50 ကျော် ပါဝင် လာတာ ရယ်ကြောင့် အကြိုက် တွေ့ စေမှာပါ ။
မိမိ ဖန်တီး လိုက်တဲ့ စာလုံးလေး တွေကို online မှာ သုံးတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် video တည်းဖြတ်တဲ့ အခါမျိုး တွေမှာ animated စာတန်း ထိုးတာ တို့ကို
လုပ်ဆောင် ပေးနိုင် ပါတယ် ။ ထုတ်နိုင်တဲ့ format တွေ ကတော့ PNG, JPG, Tiff, BMP, GIF, TGA etc. Animation to Movie, SWF (Windows), GIF animation or Image တို့ကို အကောင်းဆုံး ထုတ်ပေးနိုင် ပါတယ် ။
full ဖြစ်စေဖို့ အတွက် ဒေါင်းလော့ ဖိုင်ထဲမှာ keygen ထည့်ပေး ထားပါတယ် ။
Aurora 3D Text & Logo Maker 14.07.21 Multilingual Full Version Free Download
Aurora 3D Text & Logo Maker 14.07.21 Multilingual | 42.25 MB
Downlaod links: Aurora 3D Text & Logo Maker 14.07.21 Multilingual ( 42.25 MB )
SoftOrbits Icon Maker 1.0 + Key (4Mb)
ဒီကောင်လေး ကတော့ icons တွေကို ရေးဆွဲတဲ့ နေရာမှာ အမြန်ဆုံးနဲ့ အရည် အသွေး ပြည့်ဝမှု ရတယ်
လို့ ဆိုထား ပါတယ်။ Windows နဲ့ Android iOS Applications အစရှိသည့် iOS နဲ့ Android icons တွေ
ကို PNG format, HD icons ,design, edit and convert small graphics, မျိုးစုံဖန်တီးလို့ရပါတယ်။
desktop or mobile application, iPhone icons တွေကို Icon Editing လုပ်တဲ့နေရာမှာ ဒီကောင်လေး
ကို တော့ တော် တော် များများ သုံးကြပါတယ်။ Full Version ဖြစ်စေဖို့ အတွက် ဒေါင်းလော့စ် ဖိုင်ထဲမှာ
Key ကိုထည့်သွင်းပေး ထားပါတယ်။
နောက်ထပ် လုပ်ဆောင်ချက် တွေကိုတော့ အောက်မှာ ဆက်ပြီး ဖတ်လိုက်ပါ။ ၀င်းဒိုးအားလုံးမှာ အသုံး
Even if you can't draw, the tool will help you produce great looking icons out of any picture, automatically applying effects to create icons with normal, highlighted, active and disabled look.
No two platforms are the same. Windows, OS X, Android, iOS and many other platforms use icons developed to their very own specifications.
Did you know about 32-bit, 256x256 pixel icons in PNG format used throughout Windows7and 8?
Are you aware of HD icons sized up to 1024x1024 pixels used in Mac OS X?
Do you know the difference between iOS and Android icons?
Whether you are developingadesktop or mobile application, SoftOrbits Icon Maker will help you produce icons conforming to all the requirements of your target system.
With SoftOrbits Icon Maker you don't have to remember the difference between iPhone icons and icons used in Android apps or bother about the different formats and sizes of icons used in Windows and Mac OS applications.
SoftOrbits Icon Maker comes with some of the most comprehensive graphic editing features you could expect from an icon editor.
Crop, rotation, drawing and pixel-level editing tools are all available to enable you create some of the best looking icons.
With SoftOrbits Icon Maker you can easily enhance your icons withawide range of special effects.
You can sharpen icons or add blur, change brightness and saturation, and use more than 20 other special effects available in the built-in editor.
You can colorize icons, add shadows and glow, create active and disabled versions of icons, and useawide range of geometric correction and distortion controls.
With SoftOrbits Icon Maker you won't have to draw each individual icon size.
Instead, you can usealarge master image, automatically producing smaller versions of that image for the platform of your choice.
Moreover, SoftOrbits Icon Maker is well aware of the different file formats required for the different platforms.
As an example, Windows7makes use of the PNG format for high-resolution icons while still employing the older ICO format for smaller sizes.
SoftOrbits Icon Maker will automatically produce images using the correct combination of resolution and file format.
Start with the largest size, and SoftOrbits Icon Maker will automatically downsample the master image to produce all the required icons for your selected platform in justafew clicks.
SoftOrbits Icon Maker comes withapowerful batch mode, allowing you to apply pre-defined effects and produce system icons for your target platform out ofabatch of different images.
The batch mode can do as much as takingabunch of images and producing normal, disabled, active and highlighted versions of icons in all sizes and color depths required for your target platform.
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, March 22, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Icon, Logo Maker, Software
RonyaSoft CD DVD Label Maker ကတော့ CD, DVD အခွေရဲ့ Cover ပုံ ကို မိမိ စိတ်ကြိုက် ဒီဇိုင်း
အမျိုးမျိုးနဲ့ ဖန်တီးလို့ ရပါတယ်။ အသုံးပြုရတာလည်းလွယ်ကူပြီး အခွေကူး သမားတွေ အတွက် အရမ်း
ကို အသုံးဝင်စေပါတယ်။ ပုံတွေလည်း လိုသလို Editing ပြန်လုပ်ယူလို့ရပါတယ်။ DVD Cover လုပ်ဖို့
အ၀ိုင်းပုံ လေးတွေ တင်မက လေးထောင့် ပုံ တွေလည်း ဖန်တီးလို့ ရပါတယ်။
နောက်ထပ် Template အလန်းလေး တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ သူပေးထားတဲံ Template ကို မကြိုက်
လို့ ကိုယ်တိုင်လည်း ဖန်တီးလို့ ရပါသေးတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ် က 7MB လေးပါ။ သုံးရတာ ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး နဲ့
လွယ်ကူပြီး စိတ်ကြိုက် Cover ပုံတွေ ဖန်တီး နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆော့ဝဲလ် ကို Full Version သုံးရအောင် Resgister Key ပါ တင်ပေးထားပါတယ်။
ဆော့ဝဲလ် ကို Install ပြီးတာနဲ့ Resgister နေရာမှာ Text ဖိုင်မှာ ပေးထားတဲ့ Name နဲ့ Serial ကို
ကော်ပီ ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ RonyaSoft CD DVD Label Maker လေးကို Full Version
အဖြစ် ကောင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ စိတ်ဝင်စားရင် အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ။
ကဏ္ဍ Graphics, Logo Maker
Aurora 3D Text & Logo Maker v13.12.01 ML Incl Keymaker
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, December 18, 2013 No comments:
AAA Logo Maker Full Version (23MB)
design တွေ logo image တွေ ဖန်တီးတဲ့ နေရာမှာ professional အဆင့်ထိ ရှိတယ်လို ပြော
logo designers တွေအတွက် logo images, colors and effects ပေါင်း 2000 ကျော်ပါဝင်ပါ
logo templates ပေါင်း 100+ ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။
This logo design software will help you to design professional logo image for printing or the
Web in minutes! Choose one of 100+ pre-made logo templates as start point for your logo
project or createablank logo project and make your own logo from scratch.
အထဲမှာ Serial ကီးလေးပါ ပါတယ်။ အမြဲတမ်း အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Full Version ပါ။
Aurora 3D Text and Logo Maker Full-version
မျှဝေသူ Unknown မှာ Tuesday, November 27, 2012 1 comment:
မျှဝေသူ Unknown မှာ Thursday, May 10, 2012 No comments: